5 Sababood oo Kooxdaada Iibinta aysan Gaarin Kootadooda | Martech Zone
Qvidian ayaa daabacday iyaga Isbeddellada Isbeddellada Iibinta ee 2015 oo waxaa ka buuxa tirakoobyada qaybaha iibka oo kaa caawin doona inaad qiimeyso waxqabadka iibkaaga ee ka soo baxa natiijooyinka.
Ururada 2015 waxay sameynayaan isbedel aasaasi ah oo ku wajahan koritaanka gardarrada ah. Hogaamiyeyaasha iibintu waa inay dib-u-eegaan sidii ay kooxahooda uga dhigi lahaayeen kuwa guuleysta iyagoo fiirinaya wax ka baxsan taatikada iibka tayeynta iyo xoojinta xoogagga iibka ee fulinaya dhammaadka-ilaa-dhamaadka-iibka fulinta.
Maaddaama waaxyaha iibku ay riixayaan kordhinta qiimaha guuleysiga iyo hagaajinta helitaanka kootada, 5 sababo muhiim ah oo aan loo gaarin kootada ayaa jira:
42% fursadihii ayaa ku dhammaaday go'aan malaha.
41% fursadaha way dhammaadeen maxaa yeelay iibku wuxuu ahaa awoodin inuu si wax ku ool ah u soo gudbiyo qiimaha.
36% fursadaha ayaa luntay maxaa yeelay iibku wuxuu ahaa hawlo kale oo maamul ku raran oo aan wakhti lagu lumin iibinta.
36% fursadihii waa luntay maxaa yeelay kor u qaadida reps waxay qaadataa waqti aad u dheer.
30% fursadihii waa luntay maxaa yeelay sababta oo ah maareeyayaasha iibku ma awoodin inay si wax ku ool ah u awoodaan inay tababaraan reps.
Waxaa jira aragti weyn oo ka dambeysa lambarradan!
Haddii shirkaduhu aysan go'aan ku dhammaanayn, markaa sii kobcinta xiriirkaas la leh otomaatiga suuqgeynta, suuqgeynta emaylka, iyo munaasabadda iyo fursadaha kale ee dhisidda xiriirka waa lagama maarmaan.
Haddii iibku uusan awoodin inuu si wax ku ool ah u soo gudbiyo qiimaha, cilmi-baarista aasaasiga ah iyo tan sare oo ay weheliso waraaqo caddaan ah, daraasad kiis iyo marqaatiyaal ayaa ah dadaal suuq-geyn lagama maarmaan ah.
Haddii iibintu ku gubato hawlo kale, otomaatiga iibka ayaa muhiim ah - laga bilaabo garaacida baabuurta illaa iyo maamulka maaraynta.
Iyo haddii kor loo qaado iibka iibka iyo tababbarku waxay tilmaamayaan xoogaa shaqaale iyo fursado tababar oo ururka dhexdiisa ah.
Infographic wuxuu leeyahay waxyaabo kale oo muujinaya in iibka iyo suuqgeynta ay tahay inay fiiro gaar ah u yeeshaan - gaar ahaan fahamka habka iibsiga macaamiisha. Halka macaamiisha badankood eegaan funnel, Waxaan rumeysanahay inay seegi doonaan tirada arrimaha deegaanka ee saameynta ku leh go'aanka iibsiga - dhammaantoodna waxay ku saleysan yihiin dhisidda kalsooni iyo awood labadaba rajada.
Laga soo bilaabo Qvidian
The Isbeddellada Iibinta Iibka Warbixintu waxay muujineysaa in inta badan ururada maanta ay ka gudbayaan miyir-qabka una gudbayaan korriin dagaal, caqabadaha sida soo noqnoqoshada, la'aanta habka wax iibsiga loogu talagalay iyo waxyaabaha ku jira, iyo nidaamyada kala go'ay oo xadidan Analytics dhammaantood waxay ka wada shaqeynayaan sidii loo dhaawici lahaa qadka hoose, loo hor istaagi lahaa helitaanka kootada, iyo ka hortagga koritaanka waara. Si looga gudbo caqabadahaas, ururradu waa inay hagaajiyaan meelaha muhiimka ah ee wareegga iibka si ay si guul leh ugu dhisaan, u fuliyaan uguna fiicnaadaan dadaallada iibka.
Tags: 2015safarka iibsashada macaamiishahabka iibsiga macaamiishakooto ayaa seegtaykootada iibka ayaa seegtayqodiyaansababaha iibkaotomaatiga iibkaKordhinta Iibkafulinta iibkaIsbeddellada Iibinta IibkaSoo Jeedinta Iibkakootada iibka
Niyad jabinta Suuqgeynta Ururka Iibka
Jul 19, 2015 markay ahayd 8:29 AM
Runtii tirakoob aad u weyn oo u horseedi kara waxqabad wanaagsan hubaal. Waxay iga caawin doontaa inaan beddelo diiradeyda oo aan gaaro go'aanno dheeri ah.
16, 2020 at 1: 10 AM
Maqaal xeel dheer. Markii aan muddo dheer ka shaqeynayay koox wax iibisa, waan fahmay qodobbada aad muujisay. Waan ku raacsanahay qodobkaaga ku saabsan hirgelinta otomaatiga iibka. Waxay iga caawin doontaa inaan sameeyo go'aanno iib ah oo wanaagsan.
Jan 23, 2021 saacadu markay ahayd 8:37 PM
Waxaan ku raacsanahay in la'aanta go'aan qaadashada degdegga ahi ay tahay mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee kooxda iibku u awoodi weydo inay gaadho bartilmaameedkooda. Waxaan aragnay tan marar badan. Go'aanka degdegga ahi waa xalka. "Waqtigu waa lacag!"